Inona no hatao raha manomboka manaikitra ahy ny zanako kely !. Tontolo alika
Ny olombelona sy ny alika dia karazany roa samy hafa izay nifankahalala nandritra ny an'arivony taona maro, izay namorona kolontsaina malaza feno angano manodidina ny endritsika. mascotas, izay matetika no mitarika antsika hanao fandikana tena lehibe ratsy momba ny fihetsika na fitondran-tena sasany an'ny biby.
Androany no hanokanako ity lahatsoratra ity ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy ny alikantsika manomboka manaikitra antsika.
2 Ahoana ny fomba firesaky ny alika
2.1 Biby ara-tsosialy
2.2 Dingana fampiroboroboana ny maha izy azy
3 Inona no ampiasain'ny alika ny vavany?
3.1 Fifandraisana am-bava + Serasera fitadiavam-bola
3.2 Samy hafa isika
3.3 Ny zava-dehibe mikasika
3.4 Kitiho ny alikako
4 Manaikitra ahy ny alikako
4.1 Fomba ifandraisana
4.2 Rehefa manaikitra ny alika mandra-paharary azy
5 Inona no azoko atao mba hanabeazana ny alikako raha manaikitra ahy mafy izy
6 Andao hiverina
Araka ny azontsika an-tsaina rehetra, ny herinandro voalohany amin'ny fiainan'ny alika dia tena zava-dehibe amin'ny andro sisa niainany. Efa niresaka momba izany tamin'ny lahatsoratra teo aloha aho, manao ahoana izy ireo Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: adin-tsaina amin'ny alika kely I y Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: adin-tsaina amin'ny alika kely II, Na izany aza, anio aho hanome ny lohahevitry ny lohahevitra, hanova ny fifantohana kely ary hanome azy feo mazava kokoa sy ilaina kokoa, satria hataoko amin'ny fanazavana ny fitondran-tena mahazatra amin'ny alika, toy ny manaikitra, ary ny olana ara-pihetseham-po aterak'izany ho an'ny alika kely.
Ahoana ny fomba firesaky ny alika
Alika, toy ny olombelona, biby fiarahamonina izy ireoary mifanerasera amin'ny olona hafa amin'ny karazany miaraka amin'ireo fahaiza-manao 5 mandrafitra ny faharanitan-tsain'ireo biby fiompinay. Ity faharanitan-tsaina ara-pientanam-po ity dia nampiroborobo satria zanak'alika izy ireo, izay manome azy ireo fanabeazana ara-pihetseham-po izay manome torolàlana mba hahazoan'ny alika kely ny fitaovana ilaina hahafahana mifandray amin'ny olona sisa rehetra ao amin'ny andiany.
Ny renin'izy ireo dia mandrisika azy ireo amin'ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana, manomboka amin'ny dingana maha-teraka azy ireo, izay naseho fa ny fampandrosoana ny foetus dia misy fiantraikany amin'ny andiana fanentanana manomboka amin'ny fihetsiky ny visceral ka hatramin'ny ambaratonga hormonina reny, izay hampifandraisina amin'ny ny toe-tsaina sy ny fihenjanana ateraky ny reniny mandritra ny fitondrana vohoka, hatramin'ny fotoana nahaterahany, izay mahatonga ny reny handrisika ny fivalanana sy ny fahalotoana amin'ny alàlan'ny lavaka perianaly ny fiaraha-monina, izay sendra dingana marefo indrindra amin'ny fanabeazana ny alikanao, satria eo no mampivelatra ny fifandraisana amin'ny zanak'alika hafa ao amin'ny fako ary manamafy ny lalao, manomboka mizaha toetra ny karazana valiny amin'ny fifandraisana isan-karazany amin'ny sehatra ara-tsosialy, ka manomboka mampivelatra ny fahaiza-manao ara-tsosialy.
Ireo fahaiza-manao ara-tsosialy ireo dia miorina matetika manodidina ny 4-6 herinandro aorian'ny nahaterahany.
Dingana fampiroboroboana ny maha izy azy
Amin'ny antso dingana sosialy, manomboka ny fianarany ara-tsosialy amin'ny lafiny rehetra, manomboka amin'ny sehatry ny fihetsika tsy mahomby (toy ny fantatra amin'ny etolojia hatramin'ny fitondran-tena ara-tsosialy mifandraika amin'ny ady amin'ny biby), hatramin'ny fomban'izy ireo, ny fitondran-tenany mahery setra, ny fifanandrinana, ny fanekena, ny an'ny sidina, raha fintinina, fanapahana ara-tsosialy. Misy ihany koa ny hafa toy ny fahatokisan-tena, ny fikambananana ary ny fananganana vondrona ao anaty andian'omby izay hisy fiantraikany, ohatra, ny fomba fihazana, ny fitondran-tenany ara-nofo ary ny foto-kevitry ny faritany izay hivoatra amin'ny dingana manaraka.
Amin'ity dingana ity dia manomboka mametraka fifandraisana ara-tsosialy amin'ny karazana hafa, anisan'izany ny lehilahy. Fotoana tokony hitandremana mafy ianao, satria mora tohina izy ireo.
Azontsika atao ny mizara ny ambaratonga samihafa ananan'ny alika amin'ny fampivoarana ny fitondran-tenany, amin'ny dingana 7 samy hafa, miavaka tsara, amin'ny alàlan'ny fitomboany sy ny fahamatorany. Ireto dingana ireto dia:
mikarakara mialoha (talohan'ny nahaterahany).
pahafatesan'n'y zaza (manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 2 herinandro).
Tetezamita (manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro).
-piaraha-monina (manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 12 herinandro).
HO AN'NY ZATOVO (manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 8 volana).
olon-dehibe (manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 volana).
fahamatorana (manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 taona).
Amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo olona hafa amin'ny karazam-boronao sy ireo karazany hafa, dia hampivelatra ny sainao ara-pientanam-po ianao amin'izany Izy io no hametraka ny fototry ny toetranao.
Inona no ampiasain'ny alika ny vavany?
Fifandraisana am-bava + Serasera fitadiavam-bola
Ny ankamaroan'ny fotoana rehefa miatrika mpanjifa aho dia mila mahatakatra izay ilainy amin'ny alikany, izay midika matetika ny ankamaroan'ny fotoana hazavao ny fomba fiasan'ny alika, ny toetrany sy ny toetrany, izay voajanahary ary iza no tsy. Ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy mora velively izany, satria ny ankamaroan'ny olana ananantsika miaraka amin'ireo namanay tongotra efatra dia avy amina zavatra tsotra iray hanazavana: karazany samy hafa isika.
Ny alika dia canida ary hominid isika, izay midika fa ny fomba fifandraisantsika sy ny fanehoantsika ny tenantsika dia samy hafa be, izay mahatonga ny fiaraha-miaina ho sarotra kokoa, ary matetika io no niavian'ny karazan-karazany rehetra tsy fifankahazoan-kevitra tsy ilaina.
Samy hafa isika
Tokony ho fantatrao ny lafiny sasany izay raha ny fahitako azy dia tena mahaliana raha ny amin'ny fanombanana izany tsy fitoviana amin'ny serasera eo anelanelan'ny karazany roa amintsika: ny olombelona sy ny alika.
Ny olombelona dia mametraka ny fampahalalana amin'ny hafatra alefantsika amin'ny olon-kafa rehefa te-hiresaka aminy mivantana isika, amin'ny fiara roa, ny iray ny am-bava ary fihetsika hafa. Rehefa te-hilaza zavatra amin'ny olona iray isika dia mirona hametraka ny fampahalalana an'io hafatra io 40% amin'ny lafiny vava, ary 60% amin'ny lafiny fihetsika.
Hafa mihitsy ny alika amin'ity lafiny ity, satria ny 99% -n'ny fampahalalana dia napetraka ao anaty hafatra amin'ny lafiny fihetsika ary 1% fotsiny eo amin'ny sehatry ny teny. Ary izany dia natao mba hahavelomany, satria ahafahan'izy ireo mamakafaka ireo olona mankahala sy ny loza amin'ny fomba voajanahary kokoa.
Amin'ny olombelona prima foana ny fampahalalana alefanao amin'ny alàlan'ny fiaramanidina mihetsika, ity dia manan-danja kokoa noho ny lafiny vava amin'ny hafatra amin'ny ankamaroan'ny tranga. Mametraha ohatra haingana: miaraka amin'ny olon-tianao ao amin'ny efitrano ianao, fahavaratra izao, mafana be ary mamelombelona ny fantsom-panafody amin'ny herinao tanteraka ianao. Mijery ny olon-tianao ianao ary mamihina ny tenany sy mikosoka ny tenany toy ny hampitombo ny hafanan'ny vatany. Mijery azy ianao ary manontany azy, mangatsiaka ve ianao? Ary hoy izy hoe tsia, nefa manao izany fihetsika izany hatrany izy… inoanao ve izany? Sa ny fihetsika mangatsiaka no zava-dehibe kokoa aminao noho izay lazainy mafy aminao?
Eny, tsy azon'ny alika iray ny maneho toy izany, satria ny alika, miatrika ny fahatsapana hatsiaka, dia haneho azy mivantana amin'ny fihetsika mangovitra, nefa tsy afaka na te hanova na hahafeno ny ampahany amin'ny hafatra.
Ny zava-dehibe mikasika
Ho an'ny olombelona, ​​kitiho, ny fahatsapana ny mikasika dia tena zava-dehibe. Amin'ny alàlan'ny tanantsika no anaovantsika ny zava-drehetra, amin'ny maha-fitaovam-pientanam-po sy fanehoan-kevitra antsika ary koa iray amin'ireo toetra ara-batana anthropomorphic lehibe, raha tsy nisy izany dia tsy ho toy izany ny zanak'olombelona.
Mamela antsika ny tanana mifanerasera amin'izao tontolo izao amin'ny fiaramanidina ara-batana, kitiho ny olon-kafa sy olon-kafa avy amin'ny karazany hafa, manodinkodina fitaovana, zavatra, maneho fihetseham-po sy fihetsem-po, miaro, manafika, sns sns.
Ny olombelona matetika tsy mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny mikasika, izany io no iray amin'ireo tsapantsika fototra, ary ny tokana raha tsy misy izany dia tsy afaka miaina ianao, satria taova mahatsapa izay tsy azo atao ny mandà na tsy miraharaha.
Na dia mandrakotra ny vatantsika iray manontolo aza ny fahatsapana ny mikasika, dia mifantoka amin'izany eo am-pelatanantsika ny saintsika, amin'ny maha-zavatra ara-dalàna ny olombelona ny famakafakana zavatra an-tanana. Izany no mahatonga ny tanana manana ny toerany mitovy amin'ny an'ny maso, orona, sofina na lela, satria io dia ampahany amin'ny vatantsika izay matetika isika no mitady sy mahazo vaovao.
Araka ny lazainy amintsika Tomas Ortiz Alonso, Profesora-Tale an'ny Departemantan'ny Psychiatrie sy Psychology ara-pahasalamana. Faculty of Medicine an'ny Complutense University of Madrid:
Touch dia fitaovana voalohany ifandraisan'ny reny sy ny zaza.
Amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny hoditry ny reniny dia misambotra ny hovitrovitra izy ary mahatsapa ny fahatsapana omeny. Amin'ny andro voalohany amin'ny fiainana, ny reny sy ny ra dia afaka mamantatra ny zanany manokana amin'ny fametahana ny takolaka na ny tanany. Amin'ireny vanim-potoana voalohany amin'ny fiainana ireny dia tena ilaina koa ny mikasika ny fampandrosoana ara-pihetseham-po ny zaza sy ny zaza, noho io antony io sy noho ny fitaomana ny fizotran'ny fahalalana ara-pahalalana taty aoriana dia ilaina ny hampivelaran'ny ray aman-dreny ny fahatsapana ara-dalàna ny zanany hatramin'ny nahaterahany. .
Ny fahaizan'ny tactile dia mampitombo ny valin'ny zaza amin'ny tontolo iainana. Raha ny marina, tamin'ny fanadihadiana natao niaraka tamin'ny zazakely dia hita fa ny fikolokoloana malefaka dia nitarika ny zazakely hitsiky ary hitandrina kokoa ny tarehin'ilay olon-dehibe. Raha vantany vao mahazo maka zavatra ny ankizy, dia lasa mpanelanelana tena ilaina ny mikasika, izay ahazoana mombamomba azy ireo.
Ny taova mitovy amin'ny tanan'olombelona ao amin'ny alikanay dia ny vava. Izy io dia mifandray amin'izao tontolo izao amin'ny fomba mitovy amin'ny zavatra ataontsika olombelona amin'ny tanantsika. Miara-milalao amin'izy ireo izy ireo, milelaka, manasa, misasatra, miaro tena, maneho ny fihetsem-po sy ny fihetseham-pony, maka zavatra, hatsembohana (fandroahana ny hafanana amin'ny vatany) ary mazava ho azy, mazava ho azy, mihinana sy misotro. Ny vavan'ny alikantsika dia tena zava-dehibe ho azy, mitovy na mihoatra noho ny tanantsika. Raiso an-tsaina izany rehefa apetaho ny bao.
Kitiho ny alikako
Tsy ny fahatsapan'ny alika rehetra akory no hita ao amin'ny vava na ny manodidina azy, fa io koa dia manana izany fahatsapana izany ranjo, hazondamosina ary rambo.
Ny mikasika io no fahatsapana voalohany ananan'ny alika, ary manampy azy ireo hifampiresaka amin'ny reniny izy ireo ary hahazo fanentanana avy aminy amin'ny dingana vao teraka. rENY handrisika ny alika kely taorian'ny nahaterahany, tamin'ny fikolokoloana sy fikolokoloana.
Toy izany no manomboka ny fiaraha-miasa amin'ny alika amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny reniny sy ireo rahalahiny, fifandraisana izay zava-dehibe amin'ny fitomboana marina sy ny fananganana marina ary ny fivoaran'ny toetrany.
Misy aretina izay maneho mazava tsara ny filan'ny fitiavana ao amin'ny renin'ny alika sy ny olombelona, ​​izay antsoina Marasmus ara-pientanam-po. Ity aretina ity dia vokatry ny tsy fisian'ny fifandraisan'ny zaza na alika kely amin'ny reniny. Avelako eto ny fanazavan'ny mpanao gazety Maria Victoria Massi, izay manazava tsara azy:
Ny marasmus, Izy io dia aretina-pihetseham-po tsy misy kilema, izay misy fiantraikany amin'ny ankizy tsy afaka mamorona fifandraisana amin'ny zavatra, raha tsy raisina ara-potoana (ahafahana mamerina ny fiasan'ny reny) dia maty ny zaza, izany dia mitranga aorian'ny vanim-potoana mihombo mihombo ara-tsaina sy ara-batana, izay ametrahan'ilay zaza ny herisetra rehetra ao aminy, amin'ny tsy fahafahany apetraka ivelany.
Ao anatin'ny fako dia hifandray amin'ny alàlan'ny fikasihana ireo mpikambana mandrafitra azy ny alika. Manaikitra ny fifandraisana voalohany amin'ny paikady izay hivoarany rehefa mihalehibe izy.
Manaikitra ahy ny alikako
Manaikitra anao ny alika alikao, hatramin'ny voalohany dia tsy karazana aretina na fihetsika hafahafa izany, fa zavatra ara-dalàna tanteraka, satria ny alikantsika dia mirona hampiasa ny vavany hizaha sy hianarana, ary zavatra voajanahary ao anatin'ny fianarany izany. Mazava ho azy, ny fiantraikan'ny manaikitra dia tsy mitovy amin'izy ireo ary ho antsika.
Ao anatin'ny tontolon'ny fifandraisan'olombelona, manaikitra zavatra manondro fientanam-po be io rehefa maneho fihetsem-po dia fihetsem-pitiavana na fahatezerana izany. Ity torolàlana ity dia mahatonga antsika hahita ny fiasan'ny manaikitra toy ny zavatra matanjaka be, izay ny fomba fahitantsika azy matetika amin'ny fifandraisantsika. Ny nify dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny kofehin-nerveo amin'ny tamba-jotra amin'ny atidoha, izay mahatonga azy ireo hifandray akaiky ny fihetsem-pontsika.
Izany, miaraka amin'ny fanoherana lehibe kokoa sy ny tanjaka ara-batana amin'ny alikanay, dia midika fa rehefa manaikitra antsika izy dia afaka mahatsapa izany ho toy ny zavatra masiaka na mahery setra amintsika. Ary zavatra hafa lavitra ny zava-misy.
Amin'ny maha alika kely azy dia manaikitra ny alika mba hijery sy hamantatra an'izao tontolo izao, ary hifanerasera sy hifandray amin'ny hafa. Ao anatin'ny fivoaran'ny fihetsem-po izany, ny alika dia mitady ny hahatsapa ho tafakambana amin'ny reniny, ireo rahalahiny na aminao, amin'ny alàlan'ny fifandraisana mahery, izay ampiasainy ny vavany sy ny nifiny, manaikitra anao, izay zavatra tokana azony ampiasaina amin'ity dingana ity fivoarana mba hanehoana ny fitiavany amin'ny alalàn'ny inona ho azy no zavatra akaiky indrindra amin'ny fikolokoloana. Tsy misy afa-tsy izany.
Mora ny maminavina ny fanontaniana manaraka: Y ahoana raha manaikitra ahy mafy izy io,Anthony?
Rehefa manaikitra ny alika mandra-paharary azy
Tsy maintsy mieritreritra zavatra mitombina tokoa isika: zavatra iray ho an'ny alika alika kely ny manafosafo antsika amin'ny vavany hanehoana fitiavana sy fitiavana antsika, ary iray hafa mandratra anay. Mazava be izany.
Hikopaka antsika amin'ny vavany ny alika kely, hilelaka antsika ary hilalao manaikitra antsika amin'ny fomba malefaka ary tsy misy hamafin'ny fihetsem-po mahery, izay ahatsapantsika ny nifintsika tsy misy fahavoazana ara-batana. Manapa-kevitra izahay hoe inona ny hamafin'ny manaikitra izay tianay horaisina.
Rehefa alika manaikitra ny reniny na ny iray tam-po aminy, fomba iray hijerena ny fetra, raha misy, misy ao anatin'io vondrona io. Rehefa manaikitra mafy ny reniny ny alika dia mamoritra azy amin'ny famerenany ny fahatezerana amin'ny fahatezerana, ka mametraka fetra azon'ny alika kely, mifototra amin'ny famerimberenana, ny hamafin'ny kaikitra eken'ny fiaraha-monina, ary ny heverina fa herisetra. Ity dia fomba iray laharana.
Rehefa manaikitra ny rahalahiny ity alika kely ity ary mandratra azy ireo dia manafika azy ireo, mamerina amin'ny herisetra ny herisetra, izay fihetseham-po voajanahary indrindra, amin'ny fotoana tsy hiarahan'izy ireo milalao aminy intsony, ary tsy miraharaha azy amin'ny hetsika rehetra. Ny puppy dia tsy maintsy mianatra mifehy ny tanjaka ny manaikitra azy mba hanaiky ny vondrona sy hahatsapa ho mifamatotra amin'izany, izay iray amin'ireo antony manosika lehibe indrindra an'ny alika, ho toy ny biby ara-tsosialy izay misy azy ireo, dia ny fahatsapana fa ekena sy ampidirina ao anaty vondrona.
Isika olombelona dia manao zavatra tena mitovy, manasaraka ny olona mahery setra ho an'ny vondrona na ny fiarahamonina, amin'ny karazana stratum sosialy-toekarena-kolontsaina. Na any amin'ny birao na an-tokontany.
Inona no azoko atao mba hanabeazana ny alikako raha manaikitra ahy mafy izy
Rehefa alik'alika ny alikantsika dia hifandray amintsika tahaka ny reniny na amin'ny mpikambana ao amin'ny fako io, araka ny efa nohazavaiko teo aloha. Ao anatin'izany fifandraisana izany dia hisy ny fifandraisana, izay tsy maintsy manapa-kevitra isika hoe aiza ny fetra ary mahafantatra ny fomba hamindrana azy ireo, tsy misy herisetra ary tsy misy famoretana, miabo hatrany. Ny fifantohana amin'ny olana eo am-pelatanana, ny famerana ny alika arak'izay lazain'ny manaikitra, dia lojika ary tena ilaina amin'ny fanabeazana ny biby, mba hilamina kokoa ny fiainana miaraka aminy.
Noho izany, tsy maintsy ampianarintsika izy hatramin'ny fahazazany mba hanakanana ny manaikitra, ary amin'ity fomba ity, esory ny olana amin'ny ho avy. Mora ny manabe ny alika hanakana ny hanaikitra azy rehefa alika ny alika.
Rehefa miara-milalao aminy isika, raha vao manery antsika ny nifiny dia heverintsika fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavintsika izany, hiteny isika hoe tsia, hentitra sy matanjaka, ary hijanona tsy hihaino intsony isika, misintona ary tsy miraharaha azy. Izany no mitovy amin'ny rehefa mametra fetra ho anao ny reninao.
Raha ny alikao dia mihoatra ny 1 taona ka manaikitra ny tananao, ny tongotrao na ny fitafianao mahery, tsy maintsy mandeha any amin'ny matihanina ianao amin'ny fanabeazana canine, hanampy anao hahatakatra sy hanova ny fihetsik'izy ireo, raha ilaina izany.
Ny alika dia mampiasa ny vavany amin'ny zavatra bebe kokoa noho ny mihinana na manaikitra, mampiasa azy koa izy mba hifandraisana. Miankina amintsika sy amin'ny fanabeazana izany ampitaintsika, amin'ny alàlan'ny fametrahana fetrany, tsy misy herisetra na herisetra, izay fantatry ny alikantsika ny fomba sy oviana ary indrindra amin'ny hery manao ahoana no hampiasana ny vavany.
Miarahaba anao ary misaotra betsaka anao namaky ahy. Raha manana fanontaniana ianao dia azonao atao ny manontany ahy ny hevitr'ilay lahatsoratra.
Hihaona tsy ho ela ary hikarakara ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no hatao raha manomboka manaikitra ahy ny alikako
Fa maninona ny alika no manana muzzles mando?
Ireo toetra mampiavaka ny Griffon Bruxelles